musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » 2021 Caribbean Tourism: Gut Chibhakera
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Aruba Kuputsa Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • Caribbean • Cayman Islands Nhau • Kurwisa • Dominica Kuputsa Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • France Kuputsa Nhau • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • Mutsvene Lucia Breaking News • Saint Vincent neGrenadines Breaking News • Trending Now • Turks neCaicos Kupwanya Nhau • US Virgin Islands Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nyika dzinonyanya kushanya munyika dzinosanganisira Aruba, Antigua, Barbuda, Bahamas, St.Lucia, Dominica, Grenada, Barbados, St. Vincent, neGrenadines, St. Kitts neNevis, Jamaica, Belize, iyo Cayman Islands , uye Dominican Republic (iadb.org). Kune aya zviwi, kutenderera kwenyika ndidzo hupenyu hwavo hwehupfumi uye kwakanyungudika nehusiku.
Kana COVID yakasimudza musoro wayo wakashata pazvikepe zvekufambisa, manejimendi aive akarara pairi vhiri.
Nyaya dzekushanya, idzo dzaigona kuve dzakakomberedzwa uye dzakatariswa mumatanho ayo ekutanga dzakatenderwa kukura uye kurwisa nyika yese.
Kusvika nanhasi, vafambisi vengarava uye vatariri vekushanya, vakuru vehurumende, uye vakuru vakasarudzwa vanoramba kuramba kutora mhosva yekuregeredza kwavo.
Vazhinji veavo vanotarisira kufamba kwechikepe kana indasitiri yekushanya havana kumbobvira vakumbira ruregerero nekuregeredza kwavo chokwadi nesainzi uye nemaitiro avo "musoro mujecha" kune manejimendi emasangano avo uye kugara zvakanaka kwevafambi nevashandi.
The kuputsika kwekuparadza chibereko chekutadza kwakazara kweCaribbean kusiyanisa zviitiko zvehupfumi uye maonero eopopeti ayo zviwanikwa. Iyi ndiyo imwe yenzvimbo diki dzakasiyana-siyana dzepasirese ine accounting yekushanya kwe14 muzana yeGDP mu2019, inonyanya kudunhu. Nyika dzeLAC dziri pakati penjodzi dzinowanzoitika munyika uye nenjodzi dzinongoitika dzakaita sezviitiko zvezuva nezuva pane kuvhunduka kana kushamisika. Chii chitsva, zvisinei, iko kunosiririsa kwakakwirira uye kunotyisa kumhanya uye kutsungirira uko iyo coronavirus yakanganisa hwaro hwehupfumi hwenzvimbo idzi.
Kubuda kunze kwekumanikidzwa hibernation, iyo yekugamuchira vaeni, yekufamba, uye yekushanya maneja avo vakapona pakaipisisa denda iri ikozvino vasara nebasa rakakura rekuregedza iyo indasitiri kure nehupenyu kutsigira uye kuyamwisa zvakare kuhutano.
Kunge chero munhu anga achirwara - pane chikonzero chekutora nhanho (kazhinji nhanho dzevacheche), kuitira kuti ubve kubva pakurwara kuenda kune hutano. Kana varwere vakaita rombo rakanaka, shamwari, mhuri, uye mazano akanaka kubva online Google pundits inopa nzira dzekudzoka. Varwere vanogona kugumburwa uye vodzokera-kumashure zvishoma, asi nehukama uye kutsunga, ivo vachapora uye vagadzirire kurwa.
Zvinoenderana neInter-American Development Bank (IDB) iyo COVID-19 denda zvakakonzera kudzikira kweupfumi kwakanyanya muLatin America neCaribbean mumakore mazana maviri. Kunze kwekuomerwa kwehupfumi ndiko kukanganisa kunopararira kwedenda munharaunda nenzvimbo dzehutano. Kunyangwe dunhu iri richingomiririra chete 8 muzana yehuwandu hwepasirese rakamhan'ara 28 muzana yevakafa vese (atlanticcouncil.org).
Kunyangwe denda risati rasvika, hupfumi hwese hwenzvimbo iyi hwaive hwakaipisisa pasi rose hwayera chete 0.1 muzana kukura muchigadzirwa chakaipisisa (GDP) muna2019. Pakati pa2013 na2019, Latin America neCaribbean GDP kukura yakaenzana ne0.8 muzana nedunhu. haisati yakwanisa kugadzira hupfumi hwakasimba.
Nyika idzi dzakakamurwa zvakanyanya maererano nekuwana zvinhu zveveruzhinji uye zvakavanzika, kubvira pamikana yezveupfumi nedzidzo kusvika pakurapwa kwehutano uye nharaunda yakachena / yakachengeteka yakashatiswa nekuwanda kwenzvimbo dzevashandi, kudyara kwakazvimirira kwakazvimiririra (16 muzana GDP), zvichienzaniswa nedzimwe matunhu, uye izvi zvinokanganisa kugadzirwa, hunyanzvi uye kuumbwa kwemabasa (cepal.org, 2020).
Kubva pakuvharwa kwendege uye zvinorambidzwa kufamba kwevatengi, vashanyi veCaribbean vakadonha ne67 muzana muna2020 maererano nedata reUN, IMF yakafunga kuti kugara kwehotera kwegore rose kwakadonha ne70 muzana, uye kufamba kwechikepe kwakamira zvachose.
Kunyangwe paine zvirongwa zvekudzivirira uye kudzikisira zvishoma nezvishoma zvirambidzo zvekufamba, iyo Caribbean kudzoka iri kunonoka kumanikidza iyo International Monetary Fund (IMF) kudzikisa yayo 2021 inofungidzirwa kukura mwero kubva pa4.0 kusvika 2.4 muzana mudunhu rese. Pakave paine vangangoita makumi matatu neshanu nemakumi masere nesere makumi masere nesere nepfumbamwe dzakabatwa nezvirwere uye zviuru mazana matatu nemazana matatu nezviuru zvakataurwa nezverufu rwakakonzerwa neruzivo coronavirus muLatin America neCaribbean (graphics.reuters.com). Pamatambudziko zana akapedzisira kutaurwa pasirese, vangangoita makumi maviri nematanhatu vakataurwa kubva kunyika dzeLatin America neCaribbean. Iyi nharaunda parizvino iri kuburitsa hutachiona hutachiwana hunosvika miriyoni pamazuva masere ese uye yataura zvinopfuura makumi matatu nesere makumi masere nesere makumi masere nesere nepfumbamwe kubva pakatanga denda iri.
Kuderedzwa kwevashanyi kwakamanikidza indasitiri kuti idzikise mabasa - ayo, mudunhu umo kushanya kunoitisa mabasa emamirioni 2.8 (ingangoita gumi muzana yemabasa ese). Uku kukanganisa kwakakomba kwehupfumi. Mune zvese, maCaribbean akarasikirwa anopfuura mamirioni maviri emabasa nekuda kwedenda (International Labour Organisation), mazhinji ari mubazi rezvekushanya.
Sezvo nyika dzeLAC dzatarisana nemafungu matsva eiyo coronavirus pakati pekemisheni yekudzivirira nhomba, kupora kunenge kwakaoma. Huru zvivakwa zvakavharwa: MuDominican Republic, iyo 400 kamuri Kunaka Punta Kana nzvimbo; muJamaica, Half Moon Hotel Jamaica (400); Kitts, iyo-makamuri makumi mashanu Ocean Terrace Inn.
Kune rimwe divi maSandals Resorts pamwe neBeach Resorts vaive varamba vachishambadzira kuenda, vakagadzira yavo yega nzira yekudzivirira uye yekushanya kuchengetedzeka uye hutano zvimiro. Mhedzisiro yacho yaive yakanakisa yekugara mwero mukati medambudziko, zvichibva pane kuvimba kwevatengi kwakagadziriswa kuburikidza nehukasha hwekusvikira mishandirapamwe.
Sandals uye Mahombekombe Resorts akavimbisa zororo risina kunetseka uye ndakakwanisa kuunza pane ichi chivimbiso kusvika zvino.
Tourism haigone kudzoka kudzamara dunhu rawana hutachiona pasi pehutongi. Parizvino, Pan American Health Organisation inoona iyo hemisphere iri "pakati pekuputika kuri kuwedzera," uye hutachiona hunoramba huchienda kuchitsuwa-chiCaribbean uko nhamba dzezviitiko zvezuva nezuva dzinokwira, uye hurumende dzeCaribbean dzine zvikwereti zvishoma zvekuchengetedza hupfumi hwadzo .
Gurukota rezvekushanya muJamaica, Edmund Barlett akatarisa nyaya iyi neziso repasirese ndokutora dambudziko. Yakabvumidza Jamaica kugovera mukugadzirisa uye yakaita kuti izwi reCaribbean rinzwike zvakanyanya uye zvakajeka. Jamaica yakava imba yeGlobal Tourism Resilience uye Crisis Management Center ine mapazi muMalta, Nepal, Kenya, uye munguva pfupi yapfuura zvakare Saudi Arabia. Bartlett akaudza eTurboNews, kuti ari kufadzwa nezve kudzokororwa kwenhamba dzekuuya kwevashanyi.
Kurasika kwemabasa mubazi rezvekushanya kunokanganisa zvachose kune vechidiki, vakadzi, nevashandi vasina kudzidza uye nekudaro kunowedzera hurombo nekusaenzana. Kushaikwa kwekusiyana-siyana nekusimudzira kunozivisawo kuvharwa kwebhizimusi uye kubhuroka pakati pemahotera, nzvimbo dzekuchengetera, uye zvimwe zvikamu zvine chekuita nebasa rekushanya (kureva, maresitorendi, zvitoro, vashanyi, vatyairi vematekisi). Nekuderedzwa kwendege uye nekuenderera mberi kwekukonana ne go / no sarudzo mu cruise line chikamu, vemaindasitiri vanobatsirana vanoenderana nevatasvi vengarava havana kwavanogona kuita kana ngarava dzikanzurwa zvachose kana kuendeswa kune dzimwe nzvimbo.
Dunhu reCaribbean riripo zvakanyanya pachikwereti. Kunyangwe hazvo nyika yepasi rose yemari yakavhura chikwama chayo pamwe chete kuti isangane nemari inoshandiswa neruzhinji munharaunda, rutsigiro rwave bakatwa rinocheka nekwose; kumanikidzwa kwepedyo-nguva kwadzikiswa asi nyika zhinji dzatarisana nedambudziko sezvo kukura kwemari nekukwereta kuri kuoma uye matambudziko aripo.